Leicester City oo u qaybinaysa taageerayaasheeda 30 kun oo ah wajiga Vardy si ay u muujiyaan inay ka xunyihiin ganaaxiisa – Gool FM
Leicester City oo u qaybinaysa taageerayaasheeda 30 kun oo ah wajiga Vardy si ay u muujiyaan inay ka xunyihiin ganaaxiisa
Liibaan Fantastic December 26, 2016
(Leicester) 26 Dis 2016 Milkiilayaasha kooxda Leicester City ayaa galabta u qaybinaya taageerayaasha kooxda wajiga Jamie Vardy si ay u muujiyaan inay ka xunyihiin ganaaxii 3-da kulan ee ladul dhigay laacibkooda.
Jamie Vardy ayaa qaatay casaan toos ah kulankii kooxdiisu ay 2-2 lagahay kooxda Stoke City markaas oo uu jilaafay Mame Biram Diouf.
Maamulka sare ee kooxda Leicester City ayaa racfaan ka qaatay casaankii Jamie Vardy balse FA-ga ingiriiska ayaa soo diiday racfaanka taas oo ka dhigan inuu maqnaan doono 3-kulan oo uu ku jiro kulanka galabta ee Everton.
Kooxda ayaa u qaybisay taageerayaasheeda 30 kun oo ah wajiga Jamie Vardy kulanka Everton si ay u muujiyaan sida ay uga xunyihiin casaankii lootaagay laacibkooda oo ay u arkaan mid ka fog cadaalada.
Jamie Vardy ayaa seddexleey ka dhaliyay kooxda Manchester City ka hor intii uusan casaan qaadan kulankii xigay ee Stoke City.
Roberto Firmino oo seegi kara kulanka ay Liverpool la yeelaneyso Chelsea kaddib dacwad lagu soo oogay
Mesut Ozil oo u ciyaaraya Arsenal kulankii 100-aad ee Premier League